Semalt: Inona no fomba mahomby indrindra hamenoana ny votoaty avy amin'ny tranonkala iray?
Ny fikojakojana ny data dia ny famoahana votoaty avy amin'ny tranonkala mampiasa fampiharana manokana. Na dia toa mahazatra ny fepetra ara-teknika aza ny fampahalalam-baovao, dia azo atao mora foana ny fitaovana na fampiharana.
Ireo fitaovana ireo dia ampiasaina handraisana ireo angona ilainao amin'ny pejy Internet manokana araka izay azo atao. Ny milina ataonao dia hanatanteraka ny asany haingana kokoa sy tsaratsara kokoa satria ny ordinatera dia afaka mifankahafantatra ao anatin'ny minitra vitsy monja, na firy ny haben'ny databotany.
Moa ve ianao mila manavao ny tranonkala iray nefa tsy mamoy ny votoatiny? Ny tanjonao indrindra dia ny manala ny votoaty rehetra ary mamonjy azy ao anaty ordinatera manokana. Angamba izay rehetra ilainao dia fampiharana na rindrambaiko izay maka ny URL an'ny tranonkala iray, mamoritra ny votoatiny rehetra ary mamonjy azy ao amin'ny ordinatera efa voatendry.
Ity ny lisitry ny fitaovana azonao atao mba hahitana ilay mifanaraka amin'izay ilainao rehetra:
2. Ampiasao ny "Save As"
Azonao atao ny mampiasa ny safidy "Safidy As" ho an'ny pejy Internet. Io dia hamonjy pejy miaraka amin'ny votoatin'ny media rehetra. Avy amin'ny tranokala Firefox dia mandehana any amin'ny Tool, ary farafaharao ny Pejy Info ary tsindrio ny Media..Hisy lisitra ahitana ireo media rehetra azonao alefa. Tokony hanamarina izany ianao ary fidio ireo izay tianao hakana.
Azonao ampiasaina ny GNU Wget mba haka ny tranonkala manontolo amin'ny alalan'ny maso. Na izany aza, ity fitaovana ity dia manana tsy fahampiana kely. Tsy afaka manadihady rakitra CSS izy io. Ankoatra izany, afaka miatrika ny rakitra hafa izy. Mamaky rakitra amin'ny alalan'ny FTP, HTTP, ary HTTPS.
HTML DOM Parser dia fitaovana maoderina mahomby izay afaka manampy anao hikapoka ny votoaty rehetra avy amin'ny tranonkalanao. Izy io dia manana safidy hafa misy fahatarana hafa toy ny FluentDom, QueryPath, Zend_Dom, ary phpQuery, izay mampiasa DOM fa tsy String Parsing.
Ity rafitra ity dia azo ampiasaina hanodinana ny votoatin'ny tranonkala rehetra. Mariho fa ny fanalana ny votoaty dia tsy ny hany asa, satria azo ampiasaina amin'ny fitsapana automatique, fanarahamaso, angon-drakitra momba ny angon-drakitra sy tranonkala.
6. Ampiasao ny baiko omena etsy ambany mba hamenoana ny votoatin'ny tranonkalanao alohan'ny hisintonana azy:
Tokony hiezaka ny tsirairay amin'ireo safidy nasongadina etsy ambony, satria izy ireo dia manana ny teboka matanjaka sy malemy. Na izany aza, raha mila mikaroka tranokala maromaro ianao, tsara kokoa ny manondro ireo manam-pahaizana amin'ny tranonkala, satria mety tsy afaka miara-miasa amin'ireny fitaovana ireny izy ireo Source .